Erectile Dysfunction Physiology ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ရောဂါဗေဒ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ ဆရာမင်္ဂလာပါ။ Erectile dysfunction ကုထုံးအဆင့်ဆ့င်သိပါရစေ။ ပန်းသေ ပာုတ်မပာုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါ။
၂။ Dear sir I am 40 years old and my penis does not erect when I stimulate with my hand. I amasmoker and I think my penis isalittle short and small in this duration. I feel this disease two weeks ago. Please treat my felling.